Adobe Photoshop Camera dia tonga tamina topi-maso mialoha ny hamoahana amin'ny taona 2020 | Famoronana an-tserasera
Ny Adobe Phothoshop Camera dia maneho ny endriny amin'ny iOS sy Android ho fampiharana miaraka amin'ny Adobe Sensei
IOS sy mpampiasa Android dia tsara vintana satria Azonao atao ny manandrana ny topi-maso amin'ny Adobe Photoshop Camera, ny fampiharana Adobe vaovao izay tanjony hampiovàna ny fakan-tsarin'ny telefaona Android sy iOS.
Fampiharana iray mifantoka Adobe Sensei Artigence Intelligence ary mikasa ny ho tonga fitaovana tsara indrindra hanentanana ny olona an-tapitrisany izay maka sary isan'andro amin'ny fakantsary avy eo mampakatra azy ireo amin'ny tambajotra sosialy.
Efa fantatray hoe amin'ny Photoshop dia afaka mifidy zavatra feno isika misaotra ny Artigence Intelligence an'ny Adobe Sensei, satria ao amin'ny Adobe Photoshop Camera hanana izany koa isika fahaizana mamoaka ny eritreritsika sy ny fahaizantsika mamorona.
Izany hoe afaka misafidy isika faritra feno amin'ny sary afaka mampihatra effets sy ireo fiasa mandeha ho azy izay hasehon'izy ireo. Ao amin'ny Adobe Photoshop Camera dia hahita sary rindrambaiko be dia be isika ka tsy mila miankina betsaka amin'ny fitaovana entin'ireo fakantsary.
Ny fahaiza-manao lehibe amin'ny Adobe Photoshop Camera dia izay manolotra anay ny fahaizana mampihatra toetra tsy manam-paharoa amin'ny fotoana fisamborana azy, na sary, sary an-tsary, sary mihetsika na sary momba ny sakafo aza. Hanao ny zava-drehetra ho azy izy io mba hanaovana ilay sary tsara ampakarintsika avy eo.
Adobe Photoshop Camera dia mahatakatra ihany koa ny atiny teknikan'ny fisamborana, toy ny isan-karazany, tonionaly, karazana seho alohan'iza izy na ny faritra misy ny tarehy. Hampihatra ireo fanitsiana ireo ianao amin'izay mba hahazoanao ny tsara indrindra amin'ny sarinao.
Hanana koa isika ho an'ny mason'ireo mpanakanto toa an'i Billie Eilish hahafahantsika mampihatra vokatra mampientam-po amin'ny sary izany. Azo jerena ho an'ny iOS sy Android izao ny topi-maso, ary mila mangataka fidirana ianao avy eo ity endrika ity miaraka amin'izany aorian'ny fanontaniana vitsivitsy dia ho vonona handray ny beta izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny Adobe Phothoshop Camera dia maneho ny endriny amin'ny iOS sy Android ho fampiharana miaraka amin'ny Adobe Sensei
Mamadika ny boaty baoritra Amazon ho sary sokitra amin'ny fomba rehetra
Ireo daholo ny vaovao Creative Cloud nambara tao amin'ny Adobe MAX 2019